ရေ ချိုး ခန်း ထဲ မှာ ဗ လာ ကျင်း ကိုယ် လုံး တီး ပုံ လေး တင် ပေး လာ တဲ့ သဇင်ဦး – Shwe Myanmar
Posted on January 7, 2021 by Shwe Myanmar
ရေ ချိုး ခန်း ထဲ မှာ ဗ လာ ကျင်း ကိုယ် လုံး တီး ပုံ လေး တင် ပေး လာ တဲ့ သဇင်ဦး
ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ပုရိသတွေကို ရင်ခုန်သံတွေမြန်အောင် ဖမ်းစားလိုက် ပြန်တဲ့ သဇင်ဦး သွယ် လျတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကို ယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆက်ဆီသဇင် ဦးကိုသိ ကြ မယ် ထင် ပါ တယ်။ဆွဲမက် ဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့
ပုရိသတွေရဲ့ရင်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ သှယလြွ ပှပှေ ဈ တဲ့ ခနျဓာကို ယနြဲ့အတူ လှပကှညလြငတြဲ့ အသား အရကေိုပါ ပိုငဆြိုငြ ထားပှီး ဆကဆြီကတွဲ့ သူမရဲ့ အမိုကစြားပုံတှနေဲ့ ညို့အားပှငြးပှငြး
ဆှဲဆောငနြို ငသြူေ လး လ ညြးဖှဈပါတယြ။ သူမရဲ့ အမိုကစြားပုံရိပနြဲ့ ဆကဆြီ ကကွ ဗီဒီယိုလေးတှကေို လူမှုကှနယြကဖြေ့ဘှတပြေါတြှငြ အမွားဆုံးတငလြေ့ရှိတာလညြးတှေ့ရပါတယြ။ လတတြလောမှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုကြ စားအ လှတရားတှနေဲ့
ညို့ယူဖမြးစားထားတဲ့ အလနြးစား ပုံလေးကိုဖောပြှထားတာတှေ့ရပါတယြ။ ပုံလေးဟာ ကှည့ရြှုသူတှမွေားပှားခဲ့တာဖှဈပှီး ပုရိသတှအမွေားဆုံး ဝနြးရံခှငြးခံေ နရ တာလညြးဖှဈပါတယြ။ ပုံေ လးထဲမှာ သဇငြဦးတဈယောကြ ဆှဲဆောငမြှုမှုရှိရှိနဲ့ လှရကလြှနြးနေ
တာလညြး ဖှဈပါတယြ။ သူမရဲ့ အမိုကစြား ခနျဓာကိုယအြလှကတော့ မှငသြူတိုငြး ငေးလောကအြောငကြို ညို့ယူဖမြး စားေ န တာ အ မှနပြှဲ ဖဈပါတယြ ။ခစွပြရိသတကြှီးလညြး သဇငြဦး ရဲ့ အမိုကစြား ပုံလေးကို ကှည့ရြှုနိုငစြရနေဖြောပြှပေးလိုကပြါတယြ။
The post ရေ ချိုးခန်း ထဲက ဗ လာ ကျင်း ကိုယ်လုံး တီးပုံလေး တင်ပေး လာ တဲ့ သဇင်ဦး appeared first on Owl Myanmar News.
ညို့အားပွငျးတဲ့ အလှတရားတှနေဲ့ ပုရိသတှကေို ရငျခုနျသံတှမွေနျအောငျ ဖမျးစားလိုကျ ပွနျတဲ့ သဇငျဦး သှယျ လတြဲ့ အမိုကျစားခန်ဓာကို ယျလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဆကျဆီသဇငျ ဦးကိုသိ ကွ မယျ ထငျ ပါ တယျ။ဆှဲမကျ ဖှယျရငျသပျရှုမောစရာ အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှနေဲ့
ပုရိသတှရေဲ့ရငျကို ဆှဲဆောငျညို့ယူထားတဲ့ အလနျးစား မျောဒယျသရုပျဆောငျလေးဖွဈပါတယျ။ သှယလွှ ပှပှေ ဈ တဲ့ ခန ဓြာကို ယနွဲ့အတူ လှပကှညလွငတွဲ့ အသား အရကေိုပါ ပိုငဆွိုငွ ထားပှီး ဆကဆွီကတှဲ့ သူမရဲ့ အမိုကစွားပုံတှနေဲ့ ညို့အားပှငွးပှငွး ဆှဲဆောငနွို
ငသွူေ လး လ ညွးဖှဈပါတယွ။ သူမရဲ့ အမိုကစွားပုံရိပနွဲ့ ဆကဆွီ ကကှ ဗီဒီယိုလေးတှကေို လူမှုကှနယွကဖွဘှေ့တပွေါတွှငွ အမှားဆုံးတငလွရှေိ့တာလညွးတှရေ့ပါတယွ။ လတတွလောမှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုကွ စားအ လှတရားတှနေဲ့ ညို့ယူဖမွးစားထားတဲ့ အလနွးစား
ပုံလေးကိုဖောပွှထားတာတှရေ့ပါတယွ။ ပုံလေးဟာ ကှည့ရွှုသူတှမှေားပှားခဲ့တာဖှဈပှီး ပုရိသတှအမှေားဆုံး ဝနွးရံခှငွးခံေ နရ တာလညွးဖှဈပါတယွ။ ပုံေ လးထဲမှာ သဇငွဦးတဈယောကွ ဆှဲဆောငမွှုမှုရှိရှိနဲ့ လှရကလွှနွးနေ တာလညွး ဖှဈပါတယွ။ သူမရဲ့ အမိုကစွား
ခနဓြာကိုယအွလှကတော့ မှငသွူတိုငွး ငေးလောကအွောငကွို ညို့ယူဖမွး စားေ န တာ အ မှနပွှဲ ဖဈပါတယွ ။ခစှပွရိသတကွှီးလညွး သဇငွဦး ရဲ့ အမိုကစွား ပုံလေးကို ကှည့ရွှုနိုငစွရနဖွေောပွှပေးလိုကပွါတယွ။
The post ရေ ခြိုးခနျး ထဲက ဗ လာ ကငျြး ကိုယျလုံး တီးပုံလေး တငျပေး လာ တဲ့ သဇငျဦး appeared first on Owl Myanmar News.
Previous PostPrevious ရိုး အ လွန်းတဲ့ မြန်မာတွေနှင့် တမာပင်က ထန်းရည်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ ဂျင်းအကြီးစားရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရင်း
Next PostNext “(၁၀)ဖိုးလောက် ပိန်သွားလို့” ဆိုပြီး ပုရိသတွေကြွေသွားအောင် ဗီဒီယိုဖိုင်လေး တင်ပေး လိုက်တဲ့ မေပန်းချီဲ